XRP Ledger: အသုံးဝင်သော Open Source Blockchain နည်းပညာ | Linux မှ
XRP Ledger: အသုံးဝင်သော Open Source Blockchain နည်းပညာ
မကြာသေးမီအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည် DeFi နယ်ပယ် အများအားဖြင့် Cryptocurrencies နှင့်၎င်း၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်သာထင်ရှားသည် နည်းပညာနှင့်ငွေကြေးဂေဟစနစ်ကိုဖွင့်ပေးသည်မရ။ မဟုတ်လျှင်ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်များနှင့်ကုန်သွယ်မှုအသုံးချမှုများသို့မဟုတ်စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းကဲ့သို့သော၎င်း၏အသုံးချမှုများစွာအတွက်၎င်း၊
blockchains (blockchain) ကိုအခြေခံသောစနစ်များ (သို့) ပလက်ဖောင်းများ (ကွန်ယက်များ) ၏နည်းပညာများစွာအတွက်ကဲ့သို့ပင်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်း၊ "XRP စာရင်းအင်း" အခြေခံအားဖြင့်aopen source blockchain နည်းပညာ၊ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးသည် နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္မရ။ အရာအားလုံးသည်ခွင့်ပြုချက် (ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ) လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသောနည်းလမ်းတို့ကြောင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအလွန်လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းရန်စီမံခြင်း (၃ မှ ၅ စက္ကန့်) ။
ပြီးတော့၊ ဒါက DeFi နည်းပညာ နှင့်နီးစပ်သည် Distributed Accounting Technology (DLT) ယခင်အခါသမယများနှင့်အခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံခဲ့သောအခြားသဘောတရားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သည့် link များကိုချက်ချင်းချန်ထားခဲ့ပါမည် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များမရ။ ထို့ကြောင့်လိုအပ်ပါကဤစာအုပ်၏အဆုံး၌၎င်းတို့ကိုလွယ်ကူစွာဖတ်နိုင်သည်။
"အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား DLT ဖြင့်၎င်း၏လူသိများဖြန့်ဝေသောစာရင်းကိုင်နည်းပညာ (Distributed Ledger Technology) ဟူသောစကားစုမှအများအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်၌အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်၊ သို့သော်အခြေခံအားဖြင့်တူညီသောအများပြည်သူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ DLT သည်နည်းပညာကိုသာရည်ညွန်းသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောငွေလွှဲခြင်းများကိုလုံခြုံသောနည်းလမ်းနှင့်ကြားခံမရှိသောဖြန့်ဝေသော databases များမှတဆင့်ဖြန့်ဝေပေးသောဒေတာများကိုကာကွယ်ပေးသည်။။ " Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Cryptocurrencies: သူတို့ကိုအသုံးမပြုခင်ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ။
Hyperledger - DeFi ဘုံကိုအာရုံစိုက်ထားတဲ့ open source community
1 XRP Ledger (XRPL): ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချပြီးအများပိုင် blockchain
1.1 XRP Ledger ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 XRP၊ Ripple နှင့်အခြားအကြောင်းများ
1.2.2 လှိုင်းပုတ်သံ (RippleX)
XRP Ledger (XRPL): ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချပြီးအများပိုင် blockchain
XRP Ledger ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် နည်းပညာ developer များထံမှ «XRP စာရင်းစာအုပ်»အဲဒါ
"developer များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအ ၀ န်းမှ ဦး ဆောင်။ အတိုင်းအတာနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောလူထုနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော blockchain ၎င်းသည်လျင်မြန်မှု၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့အတွက်ထင်ရှားသည်။ ၎င်းအတွင်းတိုးတက်မှုများတိုးတက်စေရန်၎င်း၏အထောက်အပံ့ကောင်းအတွက်၎င်း၏အနိမ့်အရောင်းအဝယ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိသာထင်ရှားသည့်အပေါင်ပစ္စည်းမပျက်စီးစေဘဲလိုအပ်ချက်များဆုံးသောစီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ခိုင်မာသောပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အခြေစိုက်စခန်းများကိုပံ့ပိုးပေးသောကျွမ်းကျင်သူများစွာရှိသည်။။ "
သူတို့သည်လည်းထည့်သွင်းကြသည် GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အိမ်ခြံမြေ "လှိုင်း"နည်းပညာဟုဆိုသည်မှာ -
"peer-to-peer (P2P) ဆာဗာများကွန်ယက်မှပံ့ပိုးထားသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော cryptographic စာရင်းဇယား ဗဟိုအော်ပရေတာမပါဘဲလုံခြုံသောဖြန့်ဝေထားသောဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုတွင်ငွေပေးငွေယူပြုလုပ်ရန်ဘိုင်ဇန်တိုင်းအမှားခံနိုင်ရည်ရှိသောသဘောတူညီမှုနည်းလမ်းသစ်ကိုလည်းအသုံးပြုသည်။။ "
မှတ်ချက်: ၏ဆောင်ပုဒ်မှ စ၍ သဘောတူညီချက် algorithms နှင့် DLT နည်းပညာ အလွန်ရှည်သည်၊ အောက်ပါအချက်အလက်များအတွက်ပိုမိုသိရှိလိုပါကရှာဖွေနိုင်သည်။ link ကို 1 y link ကို 2.
XRP၊ Ripple နှင့်အခြားအကြောင်းများ
ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက, XRP စာရင်းကိုင် (XRPL) တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် open source နည်းပညာ မည်သူမဆိုပရောဂျက်များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းကို၎င်းတို့ကိုသုံးသောအခြားအမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကပိုမိုလူသိများသည်။ ၎င်းတို့အနက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
RippleNet (ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်း) တွင်လည်ပတ်သော XRP Ledger ၏ Cryptoactive သို့မဟုတ်ဇာတိ cryptocurrency သည် XRP Ledger (Distributed ledger database) ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းကို Ripple ကုမ္ပဏီမှဖန်တီးခဲ့ပြီး၎င်းသည်အခြားရှိပြီးသားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် SWIFT ကဲ့သို့ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းများထက်လျင်မြန်။ စျေးပိုကြီးသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ရှိပြီးသား Fiat ငွေကြေးများအကြားပေါင်းကူးတံတားတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောမိတ်ဖက်များမပါဘဲအများပိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
XRP Ledger တွင် RippleNet ဟုခေါ်သောငွေပေးချေခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းကိုတည်ဆောက်သောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဘဏ်များ၊ ငွေပေးချေမှုပံ့ပိုးသူများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖလှယ်မှုများနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်။ အကျိုးအမြတ်များသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုများကိုချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် XRP ကို ​​သုံး၍ တန်ဖိုးရှိသော Internet ကိုတည်ဆောက်ရန်ငွေသည်ယနေ့သတင်းအချက်အလက်များကဲ့သို့လျင်မြန်စွာအကျိုးရှိစွာရွေ့လျားနိုင်ရန်ကူညီသည်။
XRP Ledger ကိုစွမ်းအားပေးသော server software ၎င်းကိုခွင့်ပြုချက် open source ISC လိုင်စင်အောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကို C ++ တွင်အဓိကအားဖြင့်ရေးပြီးပလက်ဖောင်းမျိုးစုံတွင်သုံးသည်။ validator mode ဖြင့် run သောအခါ XRP Ledger သက်တူရွယ်တူကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်ခြင်း၊ cryptographically လက်မှတ်ထိုးထားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် XRP Ledger (မှတ်တမ်းဖြန့်ဝေသည့်ဒေတာဘေ့စ်) ၏ဒေသဆိုင်ရာမိတ္တူကိုထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
Ripple ဟုခေါ်သောကုမ္ပဏီမှစီမံထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုကွန်ယက်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိရာပေါင်းများစွာသောငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် fiat ငွေလွှဲလုပ်ငန်းအားလုံးကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာ၊ စျေးသက်သက်သာသာနှင့်ပိုမိုစိတ်ချယုံကြည်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ပါ ၀ င်သည်။
သင်နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုစူးစမ်းချင်သည် open source နည်းပညာ de "XRP Ledger", Ripple, RippleNet နှင့် XRP အောက်ပါ link ၂ ခုကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ link ကို 1, link ကို2y link ကို 3.
တိုတိုပြောရရင် "XRP စာရင်းအင်း" ဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည် DeFi domain မှ open source နည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုအခြေခံသည် Blockchain သို့မဟုတ် DLT၎င်းသည်အပြည့်အ ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လက်ခံကျင့်သုံးမှုတို့၌ရှိသည် နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္၎င်း၏သုံးစွဲသူများနှင့်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးပေးရန် ပိုကောင်းတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ ပိုမြန်ပြီးပိုစိတ်ချရတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » XRP Ledger: အသုံးဝင်သော Open Source Blockchain နည်းပညာ
Midnight Commander 4.8.27 သည် alacritty နှင့် foot အတွက်အမျိုးမျိုးသောတိုးတက်မှုများနှင့်အထောက်အပံ့များပါလာသည်
Nagios Core: Nagios ဆိုတာဘာလဲ၊ Debian GNU / Linux မှာဘယ်လို install လုပ်မလဲ။